Kobo Clara HD Review: Vidiny, endri-javatra ary fahatsapana | Ireo mpamaky rehetra
Nacho Morato | | mpamaky, kobo
Kobo dia nampiditra ny mpamaky vaovaony ny Kobo Clara HD. Izy io dia mpamaky 6 ″ ho an'ny € 129, azo ampiasaina, manazava ary miaraka amin'ny ComfortLight. (Afaka mividy izany ianao amin'ny Amazon ary ao Fnac) Ho an'ny vidiny sy ny endri-javatra dia mampahatsiahy antsika ny Kobo Glo HD taloha izy io. Tsy isalasalana fa tonga hiady amin'ny Kindle Paperwhite i Clara.
The Kobo Clara HD, Natao ho lasa sahanin'ny orinasa noho ny tahan'ny kalitaon'ny vidiny. Amin'izao fotoana izao ny orinasa dia manana mpamaky 4 Kobo Aura, Kobo Clara HD, Kobo Aura H2O ary Kobo Aura One. Ny Aura no fototra indrindra ary ny H2O no avo indrindra amin'ny 6 ″ ary ny One avo lenta miaraka amin'ny 7,8 ″ mahavariana. Saingy Clara dia miorina amin'ny ampahany voafaritry ny PaperWhite ary ny mpamaky mpamaky izay manana toetra mitovy amin'ny avo lenta saingy manana endrika milamina kokoa ary fitaovana mahazatra kokoa nefa amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Androany ireo 130 € ireo dia ny sisin-tany manomboka eto dia misy ny fitsambikinana be lavitra.
4 Rindrambaiko Kobo, Pocket ary Bluetooth
Efijery kasihina 6
Fanapahan-kevitra: HD / 300 dpi
Nanazava. TypeGenius ComfortLight Pro System
X X 159,6 110 8,35 MG
Fahaleovan-tena: herinandro maromaro
Marina ny atitany, angamba somary madinidinika, nanantena fampisehoana matanjaka kokoa aho. Marina fa tsy misy fiatraikany amin'ny toetran'ny fitaovana io fa tiako foana fa ny marika dia mitandrina ny antsipirian'ny vokatra rehetra ary ny fomba anolorany izany amintsika dia iray amin'izany. Tsy misy ifandraisany amin'ny fonosan'ny zokiny lahy, ny Kobo Aura One, izay mitandrina tsara.
Miaraka amin'ny haben'ny mahazatra 6 ″ ary fijery mahonon-tena. Tena ahazoana aina ny mitantana sy mitondra. Miseho eo amin'ny efijery ny bezel, tsy efijery fisaka miaraka amin'ireo zana-kazo toy ny mitranga ao amin'ny Aura One.
Ny ampahany aoriana, amin'ny fangejana tsara, dia toa loaka, fa tsy ny tanan'i Aura. Mahafinaritra ny fikasihana ary raha ny filazako azy dia tsy misy milatsaka. Noho izany dia manana traikefa tena tsara amin'ny famakiana izahay
Izy io dia manana bokotra tokana, ny bokotra herinaratra eo akaikin'ny USB kely. Io no bokotra tokana ao amin'ilay fitaovana. Tsy manana bokotra fihodinana pejy izy ary tsy manana slot microSD koa. Ho ahy, ny fitehirizana 8Gb azy dia mihoatra ny ampy. Saingy efa namaky olona izay mihevitra aho fa diso.
Rindrambaiko Kobo, Pocket ary Bluetooth
Rehefa avy nanandrana ny Kobo, ny rafi-piasany, ny menus, ny zava-drehetra dia tena tsotra, sariaka, matanjaka ary mandeha tsara. Fantatray fa miaraka amina Pocket mifangaro, Mozilla's Read it later izay ahafahantsika mandefa lahatsoratra amin'ny Internet amin'ny takelaka na smartphone ary hamaky azy io amin'ny mpamaky anay.
Na dia misy aza ny tsaho milaza fa hampiditra Bluetooth izy io ary azo henoina ny audiobooks, tsy hitako ireo safidy ireo. Mahamenatra izany, satria ny marina dia mety ho endrika mahaliana izy io.
Tsy misy isalasalana fa namoaka mpamaky ekitera lehibe ho an'ny fizarana iray nilaina i Kobo ary norakofan'ny Glo HD teo aloha. Toa ahy iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra io, raha tsy ny tsara indrindra hatramin'ny € 130 izay hitantsika ankehitriny.
Ho lasa benchmark izany rehefa miresaka momba ireo mpamaky tsara indrindra amin'ny resaka kalitao / vidiny. Azoko antoka fa omeko an'izay maniry mpamaky tsara izany.
Famerenana ny: Nacho Morato
- Fampidirana paosy
- Tsy manana slot SD izy io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kobo Clara HD famerenana
Mikasika ny lohahevitr'ireo mpamaky vava dia manomboka mieritreritra aho fa vitsy ny vaovao. Hita iray, hita daholo. Ireo izay manana efijery lehibe kokoa na endrika hafa (toa ny Oasis) dia misarika ny saiko ...
Saingy eo anelanelan'ity sy ny Paperwhite fahasamihafana vitsy hitako. Misy eny fa vitsy ary amin'ny ambaratonga hatsarana ... na kely aza.
Salama Javi. Eny. Tsy misy vaovao mahaliana, ary tsy mino aho fa hisy izany. Ereaders dia fitaovana natao ho an'ny lahasa manokana, famakiana, ary heveriko fa tonga ny fotoana anaovan'izy ireo azy tsara.
Ho ahy ny fanovana lehibe indrindra mety hitranga dia ny fampiasana fampisehoana loko eink, saingy tsy haiko raha ho avy izany.
Inona koa no angatahinao? Ataovy ao an-tsaina fa tsy tablette izy ireo.
Mihevitra aho fa azo hatsaraina tsara ny mifanohitra amin'izany. Ny tiako holazaina dia ny ambadiky ny efijery E Ink. Mbola maizina be izao. Izay no antony anampiana hazavana, ka toa fotsy kokoa izy io nefa amin'ireo mpamaky an-tseranana izay tsy mitondra azy (indrindra ireo izay manana efijery lehibe) dia azonao atao ny mahita io fiaviana io, mbola volondavenona be. Mazava ho azy, raha tsy namaha izany ny E Ink nandritra ny taona maro dia hisy olana ara-teknika lehibe izany.
Ny loko no nofinofiko lehibe, saingy efa niandry nandritra ny taona maro aho ary diso fanantenana maro: brigestone, Triton, Liquavista, Irx Innovations, sns… Mbola mijanona ny bala farany an'i Clearink ary tsy hitako tsara izany. Tsy resy lahatra amin'ny kalitaon'ny efijery lokon'izy ireo aho, hoy izy ireo fa hanatsara izany. Misy ihany koa ny fampisehoana ACEP avy amin'ny E Ink… angamba amin'ny folo taona ho avy.
Heveriko fa mety hahaliana raha toa ka nasiany panneaux solaires amin'ireo mpamaky. Miaraka amin'ny angovo kely ampiasain'ireto efijery ireto, heveriko fa azo atao ny manao izay hahaleo tena tanteraka an'ireo mpamaky. Heveriko fa ho lafo ny olana ary angamba ara-teknika. Orinasa Finnish no nanolotra azy io taona vitsivitsy lasa izay, tsy haiko hoe taiza ilay zavatra. Namela rohy iray amin'ilay horonan-tsary izy, tamin'ny alàlan'ny fomba nanànan'ny mpamaky azy efijery Triton (loko E Ink): https://www.youtube.com/watch?v=UbyCkJ3f4UI
SPUL dia hoy izy:
Ralehilahy, mazava ny fanatsarana ... raha kely ny fanavaozana ny fitaovana, fanavaozana amin'ny sotware.
Te hanana mihoatra ny 6 ″ amin'ny habe mitovy aho ... ary ho Kindle it
Tiako ny kobo saingy manindrahindra avy any Amazon ary mandefa boky amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny Caliber tiako kokoa ...
Valiny amin'i SPUL
Amin'ny rindrambaiko, ny zavatra mahaliana indrindra hitako dia ny fitaovana Android satria afaka mampiasa rindranasa marobe ianao. Ny mitranga dia toa hitako fa toy ny famonoana lalitra amin'ny tifitra tafondro izany. Mametraka facebook hizara fotoana? Twitter?
Ny zavatra tena mahaliana dia ny mamaky azy io any aoriana na ny asa mitovy amin'izany, manana paosy amin'ny fitaovana rehetra.
fa tsy hitako fotsiny hoe ny ereader dia tokony hanana fampiasa maro. Mazava aho fa tsy maintsy manatsara izany izy ireo, na amin'ny rindrambaiko na amin'ny rindrambaiko, saingy tsy hitako hoe hisy zavatra manakorontana izay hahagaga antsika.
Nacho omeko anao "manokana": ny Kindle Voyage nanjavona tao amin'ny pejy Amazon.com
Tsy haiko na vetivety fotsiny fa misalasala aho. Raha toa ka tsy fahampian'ny tahiry izy dia hitohy hiseho ary, na izany na tsy izany, dia mety ho zavatra toa ny "misy ao anatin'ny 2-3 herinandro". Fofona toy ny fampatsiahivana ny vokatra.
Ny marina dia raha voamarina dia tsy misy mahagaga ahy. Tsy azoko mihitsy io hazavana io na kely aza taorian'ny fisehoan'ny Voyage.
Nihevitra aho fa tsara amin'ny hevitrao ny mividy Kobo Clara .. 130 euro araka ny fantatrao, rehefa avy nanana olana vitsivitsy tamin'ny Tangus.
Loza iray ... tsy mandeha ny rindrambaiko, mila vonoiko intelo ity hamakiana pejy telo misesy, ireo faritra saro-pady amin'ny efijery dia tsy mihetsika rehefa voakasik'izany ... tsy maninona. Tsy maintsy nijanona tsy namaky ireo tantaram-pejy 800 aho satria isaky ny mamaky azy dia mankany amin'ny pejy 221, ary tsy misy fomba handrosoana haingana. Lozisialy Crappy? Zavatra malemy?
Holazainao amiko. Miarahaba.
Salama, tsy normal ny lazainao. Efa nifandray tamin'ny fanohanana kobo ve ianao mba hahitana hoe inona ny vahaolana omen'izy ireo anao ary raha manamboatra izany izy ireo dia soloina sns?
Salama, tsara fa nomena Kobo Clara hd aho ary tiako ny zava-drehetra. Io no e-book voalohany ananako, saingy misy zavatra tsy tiako mihitsy. Miadana be izy io, isaky ny mamadika ny pejy aho na mandray andraikitra dia mila Kobo zato raha vao manao azy. Ny tsy fantatro dia hoe raha zavatra ara-dalàna ao anaty e-book io na ahy izay tonga kilema amiko.
Mamaly an'i cynthia
francisco valera bengoechea dia hoy izy:
Tsy misy amin'ireo famakafakana ireo, fa notaterina fa raha mamaky boky anananao, ohatra, Don Quixote, dia mila mahazo taratasy fanamarinana ADE navoakan'ny Adobe ianao. Amin'izany fomba izany dia mametraka eo amin'ny solosainao ny Adobe ary manome alalana anao hamaky azy. Marina ve? Toa fampidirana an-tsehatra toa ahy ny namerenako azy. Ary teny an-dalana, misy fomba iray hitodihana amin'ny hidin-trano
fehin-kevitra: raha tsy te-ho andevon'ny Amazon ianao dia mividiana Kobo dia ho iray amin'ireo hafa ianao.
Valio i francisco valera bengoechea
Salama Francisco, ny olan'ny DRM dia tsy an'ny ereader. Tsy ny Hardware no mametraka azy fa ny ebook, ireo izay mametraka sy mivarotra ireo boky.
Tsy mila na mandingana fiarovana. Ao amin'ireo boky toa an'i Don Quixote dia misy fanontana an-tserasera tsy misy DRM ampolony maro.
AtreidesXXI dia hoy izy:
Salama. Famakafakana tsara fa manana fanontaniana aho, hahitana raha afaka mamaha azy ianao. Azoko tsara fa ny sisin'ny pejy dia tokony ho eo amin'ny sisin'ny efijery satria raha atao eo afovoany, ohatra, ny azonao dia ny manoritra ireo fehezanteny. Izany tokoa ve? Ary raha misy dia azo atao ve ny mampandeha azy? Satria ho ahy dia zava-dehibe ny ahafahana mamadika ny pejy na aiza na aiza eo amin'ny efijery. Efa zatra ny Sony aho ary hitako fa azo ampiharina.
Valio amin'i AtreidesXXI
Vao nividy azy aho ary tsy manohana ny fanovana ny elanelan'ny tsipika. Rehefa miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany aho dia miteny amiko izy ireo fa ny boky novidiny teo amin'ny lampihazo fotsiny no tokiny.
Izaho dia mpamaky mpamaky efa ela ary nividy boky be dia be rehefa mandeha ny fotoana. Nilaza tamiko izy ireo fa ny bokiko dia epub ary mampiasa endrika epub 3 izy ireo.
Saingy nilaza ny doka nataony fa mamaky epub izy. Ny valinteninao dia ny tsy fahaizana manova ny elanelana andalana dia tsy maninona. Manomboka amin'ny hatezerana hatramin'ny voalohany aho
Ny hany manome antoka ny an'ireo sehatra iarahako hitako fa mahazatra. Satria tsy fantatr'izy ireo raha nametraka ratsy ireo nesorinao io, izay mety ny olana mahazo anao. Efa nanandrana epub hafa ve ianao?
Namaky epub ara-dalàna niaraka tamin'i Clara aho ary tsy nahita olana.
Aorian'ny zava-niainako dia manoro hevitra aho ny tsy hividy Kobo, TSY MANANA SERVICE TEKNIKA IREO ARY TAORIAN'NY FANANTENANA ROA TAON'NY vahaolana, ny famoahana azy dia tsy mamaha na inona na inona ho anao izy ireo. Heveriko fa zava-dehibe ny fananana ity fampahalalana ity. Ny ahy hatramin'ny 2017 efa ho 200 euro ary hanary azy ... ny zavatra ratsy indrindra dia ny mieritreritra azy fa ny plug ...
RudoElCojonudo dia hoy izy:
Io no e-book voalohany ananako na dia nandiso fanantenana ahy izy noho ny vidiny.
* Miadana be ilay rindrambaiko.
* Ny fampiharana finday sy ny solosaina finday Kobo dia tsy mifanindry tsara amin'ilay fitaovana. Ireo boky novidiana teo amin'ny lampiharany ihany no hita ary raha mandroso amin'ny famakiana ianao dia tsy hita taratra amin'ny fitaovana izany.
* Tsy misy tamba-jotra wifi hita mandritra ny andro. Naveriko imbetsaka ilay izy, saingy tsy miova. Handeha any amin'ny magazay aho hijery izay vahaolana aroson'izy ireo amiko.
Mamaly an'i RudoElCojonudo
Famerenana 2017 "Kindle Oasis 7